Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » केपी ओली बेइमान पनि हो, अबुझ पनि हो
प्रा. कृष्ण खनाल – मैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जीवनभरि कहिल्यै पनि नेतृत्वका लागि योग्य मानिनँ । मलाई भ्रम भइरहेको छ कि, मैले बढी पूर्वाग्रह राखेँ कि, भनेर म कहिलेकाहीँ सोच्दै थिएँ । तर अहिले आएर संसारले चिन्ने गरेर त्यो मेरो भ्रम निवारण भयो । मेरो मात्र होइन, हामी सबैको भ्रमण निवारण भयो ।
डा. बाबुराम भट्टराई यहीँ हुनुहुन्छ । उहाँ राजनीतिक संवाद समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो । त्यो वेला उहाँले संवाद समितिभित्र अर्को विशेष समिति बनाउनु भएको थियो । पाँच जना शीर्ष नेताहरु सदस्य रहेको विशेष समितिमा तत्कालीन एमालेबाट उहाँ (केपी शर्मा ओली) नै हुनुहुन्थ्यो । त्यसमा जनमतबाट आएका सबै कुरालाई समेटेर कहाँ–कहाँ के–के राख्ने भनेर प्रस्तावनादेखि सबै धारामा छलफल भएको थियो । यो हुँदाहुँदै संविधानलाई उहाँ आफैंले तोड्नु भयो ।
त्यसैले मैले संसद विघटनलाई संविधानको भित्ता फोडेर गरिएको कदम भनेको छु । भित्तै फोडेको छ, काहीँ बाटै छैन । अब त्यो भित्ता फोडेको प्वाललाई मूल बाटो बनाइदिने कि टाल्ने अदालतको काम हो ।
अर्को, यो विषय अदालतमा मात्रै सकिने विषय होइन । अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना होला या नहोला, त्यो छोड्दिऊँ । अदालतले संविधानको बाटोभित्र आफूलाई सीमित राख्ने हो कि असान्दर्भिक हुँदै जाने भन्ने कुराहरु छ । अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरु पनि आमजनताको कठघरामा उभिनु भएको छ । साविक पदमा बस्ने मान्छेलाई नागरिकले सोध्न पाउँदैन ? देशको न्यायाधीश भएकाले उहाँहरुका व्यवहार, चरित्रमाथि औंला ठड्याउने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ । प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नै हुँदैन भन्दिन म । खुलेआम भेटे हुन्छ र, त्यो जनताले थाहा पाउनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्दछ । हामीले खोजेको पारदर्शीता हो, गुप्त मन्त्रण होइन ।
अर्काे, हिमालय क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील भएर गएको छ । दुईटा छिमेकी मुलुकहरू प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा पुगेका छन् । अर्काे सुपरपावरले एउटालाई साथ दिन खोज्दैछ । एकातिर इण्डो–युएस धुरी छ, अर्काेतिर चाइना एक्लो छ । विश्वको सन्दर्भमा चीनको के अर्थ हुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो । तर नेपालका लागि चीन, अमेरिकाभन्दा ठूलो मुलुक हो ।
नेपालका लागि भारत अमेरिकाभन्दा पनि ठूलो मुलुक हो । उसका शक्ति र स्वार्थहरु अन्य सबै मुलुकलाइ एकातिर राख्ने हो भने पनि ठूला हुने गर्छन् । त्यसैले यो दुई ध्रुवबीचको प्रत्यक्ष द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर आयो भने यो अस्थिरताको अवस्थामा कतै नेपालको निर्णय गर्ने अधिकार र क्षमताहरु हाम्रो हातबाट फुत्किँदै छ कि भन्ने पनि लाग्छ ।
हरेक आन्दोलनको एउटा लक्ष्य हुन्छ । आन्दोलन गर्ने हो, संसद पुनर्स्थापना चाहने भने ओलीलाई निकालेर फ्याँक्ने भनौं न त । यो विषयमा एउटा संस्थागत प्रक्रिया (अदालतमा) त चलिरहेको छ । तर त्यो संस्थागत प्रक्रियाले बाटो निस्किएन भने हामी आन्दोलनमा नै जानुपर्नेछ, त्यसको अर्काे उपाय छैन ।
(जनता समाजवादी पार्टीले संसद विघटनबारे गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक प्रा. खनालले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश) अनलाइन खबरबाट साभार गरिएको ।